5 nri na-ekwesịghị sie na ngwa ndakwa nri | Bezzia
Nri 5 na-ekwesịghị isi ya na ngwa ndakwa nri
Nke Torres | 12/01/2022 23:55 | Nri
Igwe igwe oyibo bụ otu n'ime ngwa ndị na-adịghị na kichin ọ bụla. Obere ngwaọrụ juputara na ịba uru nke ị na-amaghị mgbe niile ka esi eji nke ọma. N'ihi na n'ozuzu, a na-eji microwave eme ihe na-ekpo ọkụ, ma enwere ike iji ya mee ihe maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Isi nri na ngwa ndakwa nri dị mfe, ngwa ngwa, akụ na ụba na ahụike, n'ihi na ọ na-esi nri na mmiri nke ya ma belata abụba.
Agbanyeghị, ụfọdụ nri ekwesịghị ịbụ microwaved. Ụfọdụ n'ihi na ha na-efunahụ ihe ndị bụ isi ha na ndị ọzọ n'ihi na ọ nwere ike ịdị ize ndụ nye ahụike. Chọpụta ihe bụ nri ndị ị na-ekwesịghị isi n'ime ngwa ndakwa nri. A) Ee, ị nwere ike iji obere ngwa a mee ihe bara uru nke na kwa ụbọchị ọ na-ekpo ọkụ nri gị n'ime nkeji.
1 Kedu ihe agaghị esi ya na ngwa ndakwa nri
1.1 sie àkwá siri ike
1.4 Mmiri ara
1.5 Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Kedu ihe agaghị esi ya na ngwa ndakwa nri
Enwere ike esi nri ọtụtụ nri na ngwa ndakwa nri n'enweghị nsogbu, n'eziokwu, enwere ọtụtụ ntụziaka na-atọ ụtọ ma dị mma na usoro a. Otú ọ dị, ụfọdụ nri ma ọ bụ ngwaahịa ekwesịghị isi otú a, n'ihi ihe dị iche iche, dị ka ndị anyị ga-agwa gị banyere n'okpuru. rịba ama nri na-ekwesịghị isi ya na ngwa ndakwa nri na ị ga-enwe ike izere egwu na ndakpọ olileanya.
sie àkwá siri ike
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwadebe akwa e ghere eghe na-enweghị mmanụ ma dị ezigbo mma, microwave bụ ezigbo enyi gị. Ma ọ bụrụ na ihe dị gị mkpa bụ ikpo akwa siri ike, chọọ ụzọ ọzọ ma ọ bụ buru ụzọ kwadebe ya. Nsen sie ike ekwesịghị ịbụ microwaved n'ihi na n'ime ya na-etolite akwa mmiri nke nwere ike ịgbawa mgbe ọkụ na ngwa ndakwa nri. N'ihi nke a, ọ dị ezigbo mkpa ịkwanye akwa ahụ ma bee ya tupu kpoo ya na ngwa ndakwa nri.
Ọ bụrụ na esighị ya nke ọma, nje bacteria dị na ọkụkọ nwere ike ịdị ize ndụ nye ahụike gị. N'ihi nke a, ọ dịghị mgbe a ga-esi nri ọkụkọ raw na ngwa ndakwa nri, n'ihi na usoro nke ngwaọrụ a bụ ikpo nri site n'èzí n'ime. Ka ọ were enweghị ike ijide n'aka na a ga-esi nri nke ọma, n'ihi na ọ naghị eme ya n'otu n'otu. Maka otu ihe kpatara ya, a gaghị esi ya anụ raw na ngwa ndakwa nri.
Otu n'ime nri ndị a na-ekpo ọkụ na ngwa ndakwa nri bụ osikapa, n'ezie, a na-ere ngwaahịa dị iche iche a na-achịkọta maka iji mee ihe na ngwa ndakwa nri. Otú ọ dị, nnyocha ndị e mere na nso nso a na-egosi na nke a nwere ike ịdị ize ndụ nye ahụ ike. Nke a bụ n'ihi na osikapa nwere nje bacteria na-eguzogide oke okpomọkụ nke a na-adịghị erute mgbe niile na ngwa ndakwa nri. Tụkwasị na nke a, usoro a na-emepụta oyi akwa nke bụ ebe zuru oke maka nje bacteria dị iche iche na-amụba nke nwere ike ịkpata nsị nri.
Mmiri ara na-ajụ oyi bụ ụzọ ziri ezi isi mepụta nri maka nwa ọhụrụ. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-enwe ike iri nri mgbe ọ chọrọ ya ọbụna mgbe nne na-anọghị ya. Ugbu a, iji kpoo mmiri ara ara, ọ kacha mma iji mmiri ọkụ kama iji microwave. A maara nke ọma na ngwa a na-ekpo ọkụ nri na-ezighi ezi. Mmiri ara ehi nwere ike ịdị oyi n'otu akụkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'akụkụ nke ọzọ.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Mgbe ikpo ọkụ na ngwa ndakwa nri, nri ndị dị na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịdị ize ndụ nye ahụike gị. Ọ bụ ihe a na-akpọ nitrates, nke bara ezigbo uru maka ahụ ike, mana mgbe ọkụ na ngwa ndakwa nri ha na-agbanwe ka ọ bụrụ nitrosamines, ihe nwere ike ịbụ carcinogenic. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ihe fọdụrụ akwụkwọ nri, kabeeji ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ ka mma ikpo ha na pan na obere mmanụ oliv.
Ndị a bụ nri 5 na-ekwesịghị isi ya na ngwa ndakwa nri, ngwaọrụ bara uru ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe nke ọma. N'otu aka ahụ, ha ekwesịghị kpo oku nri na nnukwu mmiri ọdịnaya, dị ka mkpụrụ osisi, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịgbawa ma ọ bụ mepụta nje bacteria n'ihi iru mmiri. Site na ndụmọdụ ndị a, ị nwere ike iji ngwa gị rụọ ọrụ na nchekwa zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nri » Nri 5 na-ekwesịghị isi ya na ngwa ndakwa nri
Aghụghọ iji chekwaa n'ụlọ wee merie mkpọda Jenụwarị
Otu esi esi nagide di na nwunye nsogbu ọbịbịa nke nwa mbụ ha kpatara